निबर्तमान आइसीसी अध्यक्ष लामिछानेद्वारा गहिरो अभिरुचि | www.sidhakurausa.com
एनआरएन एनसीसी अफ युएसएको आसन्न निर्बाचनलाई गैर आबासिय नेपाली संघ अन्तरास्ट्रिय समन्वय परिषदका निबर्तमान अध्यक्ष जिबा लामिछानेले गहिरो अभिरुचिका साथ हेरिरहनु भएको छ । एनआरएन अमेरिकाको आसन्न निर्बाचनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भनेर आज बिहान वहालाई सम्पर्क गरिएको थियो ।
निबर्तमान आइसीसी अध्यक्ष लामिछानेले एनआरएन अमेरिकाको आसन्न निर्बाचनका बारे सिधा कुरालाई एउटा लिखित बक्तब्य पठाउनु भएको छ र भन्नु भएको छ:
गैरआबासिय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद युएसएमा पहिलो पटक प्रजातान्त्रिक तबरबाट निर्वाचन हुन लागेको देख्दा मलाई खुशी लागेको छ ! यो क्षणको हामीले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरेका थियौं ! संघको स्थापनाकालदेखि नै अमेरिकामा गैरआवासीय नेपाली संघ विस्तारका लागि हामीले पहल गर्दै आएका थियौं ! यस पटक संघमा रजिस्टर्ड सदस्यहरुको संख्या निक्कै उत्साहजनक रुपमा बढेको मैले देखें ! आगामी दिनमा यो संख्या अझै बढ्ने मैले अनुमान गरेको छु !
निबर्तमान अध्यक्ष लामिछानेले भन्नु भएको छ: अमेरिकामा नेपालीहरु आबद्ध अरु पनि धेरै सामजिक संघ-संस्थाहरु छन् ! निर्वाचन पछी गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका त्यहाँ सबै राज्यहरुमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ !
वहाले जोड दिंदै भन्नु भएको छ -स्वस्थ्य, प्रतिस्पर्धात्मक र सफलतापुर्वक निर्वाचन सम्पन्न होओस भन्ने कामना गर्दछु !
निबर्तमान अध्यक्ष लामिछानेले हामी अमेरिकाबासी नेपालीहरुको यो प्रतिस्पर्धात्मक चुनावलाई रुषबाट निहालिरहनु भएको छ । यो अत्यन्त खुशीको कुरा हो, हामीलाई वहाले नजिकबाट निहाले झैँ निहाल्नु भएको यस अवसरमा यो वहाको शुभकामनालाई श्रद्दापूर्बक सबैले सम्मान जनाऔ, सबैले मन पराऔ र सक्दो बाडौं ।
चुनावका तमाम उम्मेदवार, मतदाता र सम्बन्धित सबैलाई निबर्तमान अध्यक्ष लामिछानेको प्रेरणा र हौसलाका लागि सिधा कुरा धन्यबाद ब्यक्त गर्न चाहान्छ ।